Sheekada Juul ee ugu Weyn ee Dunida Ka Bilowd Sheekada Juul | RayHaber | raillynews
HomeGUUDSheekada Juul Taariikhda Korantada ee Dunida ugu Weyn
16 / 01 / 2020 GUUD, Warqad Hordhac ah
Sigaarka elektiroonigga ah ee ugu weyn adduunka wuxuu ka bilowdaa sheekada juulun
Shirkadda e-sigaarka ee Juul ayaa wajaheysa mustaqbal aan la hubin.
Toban sano ka dib markii xaflad ka dhacday San Francisco ay aasaastay aaladdoodii asalka ahayd, Ploom, waxay shirkaddu ka heshay maalgashi dhan $ 12,8 bilyan shirkadda Marlboro Altria. Silicon Valley's Juul Waxaad ka aqrisan kartaa qodobkayaga hoose si aad u aragto kororka.
2004: Qalinjabinta naqshada Stanford ee qalin jabisay James Monsees iyo Adam Bowen waxay fikrado u abuureen horjoogaha Juul Ploom.
2007: Monsees iyo Bowen waxay bilaabeen uumiga bilaabida Ploom San Francisco.
Sida laga soo xigtay PitchBook, Ploom wuxuu ka helay $ 2008 maalgalin shirkad ah illaa Feebarwari 900.000 wuxuuna kor u qaaday qiimeyntiisa qiyaastii $ 3 milyan.
Markii la siidaayay sanadkii 2011 qalabkii Ploom ee lagu iibiyay $ 75, adeegga kaliya ee la buuxin karaa waa badeecad la aqbali karo oo loo yaqaan 'hizmet Ploom Capsules.' 'Pods waxaa ku jiri kara qaybo ka mid ah tobaakada ama tubaakada.
Ogast 1, 2013: Ploom wuxuu ku furayaa Pax xaflad furitaan ah San Francisco.
Qiyaastii $ 5 milyan, Ploom wuxuu bilaabay aalad la yiraahdo Pax, vaporizer ee tubaakada caleenta dabacsan. Si loo soo saaro aaladda, Ploom wuxuu martigaliyay xaflad lagu soo bandhigayo degmada Howlwadaag ee caanka ah ee San Francisco.
Xilligan maalgashadayaasha Ploom waxaa ka mid ah Winston iyo Salem sigaar sameeyaha Japan Tubaakada, shirkadda asalka u sameysan ee barnaamijka kumbuyuutareedka maalgashiga iyo kooxda maalgashiga ee Sand Hill.
Febraayo 16, 2015: Monsees iyo Bowen waxay ka iibiyaan shirkadda PTom sumadda iyo vaporizer shirkadda Japanese tubaakada JTI. Waxay dib-u-cusbooneysiiyeen sida PaxLabs.
Mitsuomi Koizumi, madaxweynaha iyo madaxa shirkadda ToukeInc ee Japan, waxay adeegsataa Ploom inta lagu gudajiro wareysi ay la yeelatay Reuters xarun ku taal Tokyo sanadkii 2017
Juun 1, 2015: PaxLabs waxay Juul ku soo bandhigaysaa xaflad ka dhacday New York.
2016: iibinta Juul ayaa ku kordhay 700% Ameerika.
Qalabka Juul wuxuu helay caan. ABC 7 News ayaa soo warisay in iibku kor u kacay 2016% sanadka 700.
Luulyo 1, 2017: Monsees iyo Bowen waxay u doorteen Juul Labs inay noqdaan shirkad madax-bannaan, isla markaana Agaasimihii hore ee PaxLabs Tyler Goldman ayaa noqda Agaasime guud.
Nofembar 2017: Juul wuxuu noqday iibinta ugu wanaagsan e-siga suuqa.
Juul wuxuu sheegay inay iibisay 1 milyan oo unug. Sida laga soo xigtay xogta Nielsen, shirkaddu waxay qabsatay seddex meelood meel suuqa e-sigaarka.
Diseembar 11, 2017: Madaxa shirkadda Tyler Goldman ayaa ka tagay Juul. KevinBurns wuxuu ahaa maamulaha guud ee shirkadda.
Disembar 2017: Juitch wuxuu aruuriyaa $ 112 milyan oo ah maalgalin shirkadeed sida uu sheegay PitchBook wuxuuna ku daray Nicholas Pritzker guddiga.
Abriil 2018: Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ee Mareykanka, oo uu hogaaminayo Wakiilka Scott Gottlieb, ayaa bilaabay 'xayiraad qarsoodi ah' si looga hortago Juul inay ka iibiso carruurta yaryar.
Hal daraasad, falanqeeyayaasha kooxda Citi waxay uga digeen maalgashadayaasha in Juul uu bilaabay inuu jaro kaydka tubaakada.
Qoraalku wuxuu soo jeediyay in kor u kaca Juul uu xumaan karo shirkadaha tobaakada, oo ay ku jiraan Altria, British Tubaakada, iyo Qeybaha Imaaraatka, maadaama iibku hoos u dhacay sidii la filayay.
May 2018: Juul ayaa shaqaalaheeda labanlaabay isagoo shaqaaleysiinaya 400 oo dheeri ah.
Juulaay 8, 2018: Falanqeeyayaasha Wall Street ayaa sheegaya in Juul dib u soo nooleeyay suuqii hore ee sigaarka elektiroonigga ahaa, kaasoo burburay tan iyo 2014.
Luulyo 2018: JUUL wuxuu bilaabay inuu ku faafo Yurub. Wuxuu bilaabay inuu dunida xukumo.
Luulyo 10, 2018: Sida laga soo xigtay PitchBook, Juul wuxuu aruuriyay $ 16 bilyan safar uu ku qiimeeyay shirkadda in ka badan $ 1,2 bilyan.
Bowen iyo Monsees oo lagu qabtay Hoteelka Tortue bishii Diseembar 2018 oo loogu talagalay bilawga Juul ee Jarmalka.
Sebtember 11, 2018: FDA waxay sii kordhineysaa cadaadiskeeda saaran Juul iyo soosaarayaasha kale ee e-sigaarka.
Hay'addu waxay sheegtay in Juul ay waddo baaritaan ku saabsan bal inay suuqyadeeda ka iibiso dhallinyarada iyo in kale.
Sida laga soo xigtay CNBC, booqashadu waxay ahayd kordhinta baahida FDA ee bishii Abriil oo ku saabsan waxyaabaha ku saabsan sida Juul u soo bandhigtay badeecadeeda iyo haddii loogu talagalay inay wax ka qabato carruurta.
Oktoobar 2018: Juul wuxuu xoojiyaa caannimada, wuxuu hadda ka badan yahay 70% suuqa elektaroonigga ah ee Mareykanka, sida laga soo xigtay xogta Nielsen.
13 Noofambar 2018: Juul waxay joogsataa iibinta macmacaanka iyo miraha macaan ee dukaannada waxayna bixiyaan noocyadan oo keliya iibinta internetka.
Juul wuxuu sheegay inuu joojinayo inuu si kumeel gaar ah u joojiyo iibinta dhadhankiisa Pods sida ku meel gaarka ah dukaamada.
Baarayaasha waxay si wada jir ah u amaaneen tallaabada, oo ay sheegeen in ay gacan ka geysan karto ilaalinta dhalinyarada iyadoo ka dhigaysa alaabada mid soo jiidasho leh oo ay adag tahay in la iibsado. Juul noocyada dhadhanka leh wali waxaa lagu iibin doonaa khadka tooska ah, ayuu yidhi.
Diseembar 20, 2018: Altria waxay kordhisaa qiimaha Juul illaa $ 35 bilyan iyadoo heshay 12.8% Juul $ 38 billion.
Waxa Marlboro iyo Parlament sameeyaha Altria ay ku bixiyeen $ 12,8 bilyan saddex meelood meel ahaan Juul, iyadoo Silicon Valley Trade Magazine loogu yeero "maalgashiga ugu weyn ee abid laga helo shirkad Mareykanku taageeray". Marka loo eego Xarumaha Xakamaynta iyo Ka Hortagga Cudurrada, tani waxay Altria u siisay suuq ay ka mid yihiin sigaarka ololi kara marka loo eego wadarta toddobada magac ee soo socda.
CNBC ayaa soo warisay in Juul, oo xilligaas kasbatay $ 2 bilyan sanadkii, ay ka heshay $ 1.500 bilyan oo gunno ah Altria si loogu qaybiyo 2 oo shaqaale ah.
Abriil 8, 2019: Dimuqraadiyiinta senate-ka Mareykanka ayaa bilaabay baaritaan ku saabsan heshiiska Juul uu la galay Altria, iyo sidoo kale warbaahinta bulshada iyo dhaqanka xayeysiinta. Kow iyo toban senetro dimuqraadi ah, oo ay ku jiraan CNBC, madaxweynaha xisbiga Dick Durbin iyo musharraxa madaxweynenimada Elizabeth Warren, ayaa warqad u qoray Juul isaga oo weydiinaya in uu ka jawaabo su'aalaha ku saabsan dhaqanka shirkada xayeysiinta iyo heshiiska ay la leedahay Altria.
Ogast 16, 2019: Sida ku xusan buugga 'Pitch Book, Juul wuxuu bixiyaa $ 785 milyan oo sinnaan iyo deyn maalgalin ah oo laga helo Proioxis Ventures.
Sida ku xusan buugga 'Pitch Book', lacagta ayaa loo adeegsan doonaa dardargelinta ballaarinta Juul ee dibedda. Lacagtani waxay soo aruurisay $ 14.2 bilyan oo doollar.
Sebtember 9, 2019: FDA waxay ku dhufatay Juul maxaa yeelay wuxuu ku sifeeyay e-cig inuu 'gabi ahaanba amaan yahay' uuna suuq geeyay carruurta iskuulada.
99 XNUMX% waa ka amni badan yihiin sigaarka ka soo baxa alaabadaada,, daha ayaa ka ammaan badan sigaarka, tamamen gebi ahaanba amaan iyo badbaado kale oo ah sigaarka özellikle, qaasatan sida hadalada su’aasha si toos ah loogu gudbiyo carruurta iskuulka dhigata, ayaa lagu yiri warqadda FDA.
Waraaqda, sal Annaga waxaan ka walaacsanahay in heerka cudurka faafa ee kordhaysa ee isticmaalka dhalinyarada ee dors, oo ay ku jiraan alaabada Juul.
Sebtember 25, 2019: Maamulaha guud ee shirkadda Kevin Burns ayaa is casilay waxaana lagu badalay maareeyihii mudada dheer ahaa ee KC Crosthwaite ee PMI.
Crosthwaite wuxuu ahaa sarkaalka sare ee koritaanka Altria wuxuuna ka shaqeyn jiray warshadaha tubaakada in kabadan 20 sano.
Markii lagu dhawaaqay isbedelka, Juul wuxuu sheegay inuu joojinayo xayeysiinta iyo ololeynta Mareykanka. Crosthwaite wuxuu yidhi, çalışmak Waxaan ku dadaali doonnaa inaan la shaqeyno maamulayaasha, kuwa dejiya siyaasada iyo daneeyayaasha kale oo aan helno kalsoonida bulshada aan ka shaqeyno ".
Oktoobar 31, 2019: Shirkadda soo saarta Marlboro Altria, oo leh saddex meelood meel ahaan Juul, waxay hoos u dhigeysaa saamigeeda shirkadda. Qiimaha Juul hadda waa $ 38 bilyan halkii uu ka noqon lahaa $ 24 billion.
Shirkadda soo saarta ee Marlboro Altria, ayaa bishii Diseembar ee la soo dhaafay, ku iibsatay saamiga 12800000000% saamiga Juul $ 35 bilyan oo doolar, waxay dhimaysaa qiimaha maal-gashigiisa waxayna ku jirtaa shirkadda $ 4.5 bilyan.
Tallaabadan ayaa muujineysa in Juul uu ku kacayo $ 38 bilyan $ 24 bilyan oo doolar.
Maamulaha guud ee Altria HowardWillard ayaa wacay, "Kuma faraxsani inaan helno lacag naaqus ah oo ku saabsan maalgashiga Juul." Medik kama fileynay isbeddelkan lama filaanka ah ee qaybta uumiga. ”
Janaayo 2, 2020: Waxay u qoondeeyeen 1 bilyan doolar miisaaniyad dib-u-habeyn ah.
Sanadaha soo socda waxaan arki doonaa sida uu JUUL u socon doono iyo sida ay u kori doonto una wanaajiso nolosha dadka.
Mashruuca Mucjisooyinka ee TurkTraktör ee Mashruuca Sprouts
Dhallinta Qaranka Sigaar-cabista Dhallinyarta Gain Sport
Sigaar cabidda sigaarcabka TCDD
Sigaarku waa ka mamnuuc safarrada safarka ee Ruushka
Sigaar cabida iyo Iibinta Waa La Mamnuucay Goobaha Tareenka
Biinanka dhadhanka leh
Bilaabidda Sigaarka Korantada ee Dunida ugu Weyn
Shirkadda E-sigaarka Juul
Sigaarka Korantada ah ee Juul
Juul waxay dhadhamisay noocyo kala duwan
Joornaalka Ganacsi ee Silicon Valley